Uma usanda iqale ukudlala "Maynkraft" ngokuqinisekile uzothola amanye amalungu abangabulawanga egqoke njengawe. Eqinisweni, akumangazi, kwazise lezi abasebenzisi isicelo ngokwalo ibhekwa akhethekile ukuyisebenzisa ngokuphepha. Ngokushesha kuphakama umbuzo njengoba ukusungula TLauncher isikhumba. Empeleni, kungakhathaliseki ukuthi udlala esingakanani "Maynkraft" - ukushintsha ubuso kungaba ubani. Uma ungazi indlela yokukwenza, kufanele ufunde lesi sihloko ngokucophelela.
Isixazululo yenkinga, kanjani ukufaka isikhumba ku TLauncher 1.9, akuthathi isikhathi sakho esiningi. Kunconywe kumelwe uqaphe kakhulu ukuba aphinde hhayi ukuthi uphinde le nqubo. Ngakho, ukuze usungule brand isikhumba esisha uhlamvu yakho, udinga ukusebenzisa uhlelo olukhethekile. Ngaleli thuluzi, ungakwazi ngokushesha ukuxazulula le nkinga, kanjani ukufaka TLauncher isikhumba.
Uma usuvele ukulandwa lolu hlelo, khona-ke kufanele ugijime. Ngemva kokuvula Umsebenzisi uzodinga ukungena ngemvume, ngakho pre-ukubhaliswa kuyadingeka sidlule website esemthethweni umdlalo, bese ufaka idatha efanayo the window hlelo. Uma ufuna ukuthola impendulo yombuzo othi kanjani ukusungula TLauncher isikhumba samahhala, bese wena oyiwonawona. Ngemva kokungena ngemvume uzokwazi ukuthola ikhathalogi enkulu ngokwanele ngesikhumba, khetha noma yisiphi sazo, uzokwazi ukuze kungabonakali umdlalo wakho uhlamvu.
Futhi lolu hlelo ingalandwa izikhumba zako. Abanye abasebenzisi ukudala izithombe yabo abalingiswa abazakhele bona nge-ke nje sebenzisa isofthiwe ezengeziwe ukuze isicelo sabo. Yiqiniso, ngemva wonke isethi nemingcele ungakhohlwa ukulondoloza izilungiselelo. Manje ngoba sewuyazi ukuthi indlela yokufaka TLauncher isikhumba, futhi kukhona lutho eziyinkimbinkimbi, kubalulekile kanye kuphela ukuzama.
Playkey: indlela ukudlala ngaphandle ukubhaliswa service
Lapho ekhula Tulips eRussia. Lapho kukhona Tulips zasendle